Izindaba - 7 inch Arrow Segments Diamond Grinding Cup Wheels
Lokhu 7 inch isondo lokugaya indebeinezici ezingu-6 ezinama-angled, amasegimenti amise okumise okwemicibisholo aklanyelwe ukugaya ukhonkolo kanye nephansi le-terrazzo, Ungasebenzisa futhi lesi sinamathiselo sokugaya inkomishi yesondo lokugaya noma ukulungisa ukhonkolo, noma ukususa iglue, izinto zokunamathisela, i-thinset, umbhede we-grout, noma izimbotshana ezikhanyayo. Ukuze kugaywe ukhonkolo, inkomishi yokugaya ingagaya ngamandla ukhonkolo ongenalutho ukuze isuse izindawo eziphakeme. Ungasebenzisa leli thuluzi lokugaya ukhonkolo kokubili izinhlelo zokusebenza ezimanzi nezomile.
Umumo wesegimenti onolaka ukusiza ukuthi uthole ngaphansi kwama-coatings alula futhi ulungiselele ukhonkolo wakho ngesinyathelo esisodwa. Lesi simo siphinde sivimbele ukwakheka kwezinto eziphansi phakathi kwamasegimenti ngakho kufanele uhlanze ithuluzi lakho lokugaya kancane ngesikhathi sokusebenzisa.
Sine-10mm, 12mm, 15mm segment hegihts ozikhethele yona, uma udinga ezinye izinombolo zesegimenti nathi singenza ngendlela oyifisayo njengesicelo sakho. Ama-grits 6#~300# ayakhethwa. Singakwazi ukuklama amabhondi ahlukahlukene ukuze alingane endaweni yakho ehlukene eqinile.7/8", 5/8"-7/8", M14, 5/8"-11 izinhlobo zokuxhuma kwe-arbor zivumela ukufaka kuma-grinder e-engeli ahlukahlukene futhi uhambe ngemuva. ama-grinders aphansi. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kwama-intshi angu-7 ububanzi, siphinde sinikeze amasayizi angu-4", 5" njll.
Isondo elikhulu lenkomishi yokugaya ukuze kugaywe ukhonkolo ngonya, nokukhipha iglue, izinto ezinamathelayo, i-thinset, i-grout bed, noma okokunamathela okulula
Amasegimenti anama-engeli, amise okomcibisholo adizayinelwe ukukusiza ukuthi uthole ama-coating akhanyayo ngaphansi kanye nokhonkolo wokulungiselela isinyathelo esisodwa.
Ukususwa kwama-chips okusheshayo
Itholakalela umsebenzi onzima
Okunentambo noma okungeyona imicu etholakalayo ukuze kusetshenziswe kalula ngamathuluzi okugaya
Ngezicelo ezimanzi nezomile
Idizayinelwe impilo yamathuluzi ende
Thembela Isondo Lendebe Yokugaya Umcibisholo Othembekile we-Bontai ukuze likusize wenze umsebenzi wenziwe.
6" isondo lenkomishi ye-hilti
7" isondo lenkomishi yemigqa emibili
7" isondo lenkomishi ye-TGP
7" isondo lenkomishi ye-turbo
6" T-seg isondo lenkomishi
5" Isondo lenkomishi ye-S-seg
5" L-seg isondo lenkomishi
4" isondo lenkomishi yomugqa owodwa
10" inkomishi isondo